Trumpia: All-In-One စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2014 တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2014 Douglas Karr
Trumpia မိုဘိုင်းစာတိုပို့ခြင်း၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည့် All-in-one စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစုံပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်စနစ်တွင်အသိဉာဏ်ရှိသောစစ်ထုတ်ကိရိယာများ၊ တက်ကြွသောပစ်မှတ်ထားခြင်း၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကူပွန်များနှင့်အားကောင်းသည့် developer API များရှိသည်။ ဒါဟာအစ whitelabeled နိုင်ပါသည်!
အဆိုပါ Trumpia ပလက်ဖောင်း Multi- channel channel suite သည်သင်၏မိုဘိုင်း၊ အီးမေးလ်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်သင်၏ကမ်းလှမ်းချက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ သတင်းပို့ခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်နည်းဗျူဟာတစ်ခုစီ၏အင်္ဂါရပ်အနည်းငယ်ကိုပေးသည်။
စုဝေး text-to-join, သော့ချက်စာလုံးဒေတာဖမ်းယူခြင်း, အွန်လိုင်း Sign-up စာမျက်နှာ (OSP), Mobile OSP နှင့် Facebook Widget ။
ပြောဆိုမည့်အကြောင်းအရာ [Message] - 2-Way Text, Messaging Appointment Reminders, MMS Mobile eCards, Facebook & Tweets ။
ထိတွေ့ဆက်ဆံ ဟုတ် / မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုမိုဘိုင်းမဲပေးခြင်း၊ က Short Code, Text-to-Screen, Shuffle Responder ။
မြှင့်တင်ရန် - သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်၊ မိုဘိုင်းကူပွန်များ၊ Facebook ကူပွန်များ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှစ်သက်သူများ၊ Facebook Tab Editor၊ QR ကုဒ်များ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Affiliate link ကိုအသုံးချသင်တတ်နိုင်သမျှ Trumpia ၏အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးစတင်ပါ!
Tags: 2- လမ်း sms စာပို့ခြင်းAll-In-OneAll-In-One စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမန်နေဂျာအီးမေးလ်ကအီးမေးလ်စျေးကွက်Facebook ကFacebook စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လိုမျိုးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အယ်ဒီတာသော့ချက်စာလုံးဒေတာဖမ်းယူစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းmms ecard ပါမိုဘိုင်းကူပွန်မိုဘိုင်းသစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်မိုဘိုင်းအွန်လိုင်း sign-up ကိုစာမျက်နှာအွန်လိုင်း sign-up စာမျက်နှာများQR Code ကိုQR ကုဒ်များစာတိုsms ရက်ချိန်းသတိပေးချက်များsms ကူပွန်sms ecard ပါsms မဲပေးစာသားကူပွန်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့text-to-joinစာသားမှမျက်နှာပြင်ခွန်တွစ်တာ
မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သော Domain ကိုဝယ်ယူရန်